မိန်းမကိုယ်ဘာကြောင့်နံသလဲ - Page 11 of 21 - Hello Sayarwon
မိန်းမကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုအမွှေးနံသာ သုံးသည်ဖြစ်စေ နံနေတာ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအချို့ဟာ သဘာဝအရကို အနံ့ပြင်းများ ထုတ်လွှတ်တတ်ပြီး တချို့ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ကြပါဘူး။ ချွေးထွက်များခြင်း၊ အကာအကွယ် မသုံးဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်း စတာတွေဟာ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ အနံ့ကို ယာယီ ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကိုယ်မှာ ရနံ့တစ်ခုတော့ အမြဲရှိပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ အနံ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာ သာမန်ပြောင်းလဲမှုလား၊ ရောဂါကြောင့်လားဆိုတာ ခွဲခြားသိဖို့ လိုနေပါပြီ။
မိန်းမကိုယ်ဟာ ဘယ်အခါမှာ သတ္တုနံ့ရနိုင်သလဲ
ဓမ္မတာကာလပြီးဆုံးချိန် ဒါမှမဟုတ် သုတ်ရည်နဲ့ထိတွေ့ပြီးချိန်မှာ သတ္တုနံ့ရတတ်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးဟာ မိန်းမကိုယ်ထဲက pH ဓါတ်ကို ဘေ့စ်ဘက်ကို ပိုများစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနံ့ပြောင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိစ္စ၂ခုလုံးဟာ ယာယီပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အနံ့ပြောင်းတာ ကြာနေမယ်ဆိုရင်၊ ယားယံနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ပြသင့်ပါတယ်။
ရမြဲအနံ့ထက် ပိုပြီးပြင်းရှရှရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ချွေးအရမ်းထွက်ခြင်း၊ တင်းကြပ်တဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ၊ ဓါတုဗေဒနည်းနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ချည်နဲ့ ရက်လုပ်တဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်ဆင်ခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီတွေကြပ်ပြီး လေဝင်လေထွက် မကောင်းရင် အနံ့ပိုပြင်း တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဆပ်ပြာခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ ဆေးပေးခြင်း၊ အောက်ခံအဝတ် မကြာခဏလဲပေးခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ မကိုက်ညီမယ့် ကိစ္စတွေတော့ မလုပ်ပါနဲ့။
မိန်းမကိုယ်ဟာ ဘယ်အခါမှာ ငါးညှီနံ့ရနိုင်သလဲ
ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
သိပ်ပြီးဆိုးတဲ့အနံ့ဆိုရင် မိန်းမကိုယ်မှာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ vaginosis နဲ့ trichomoniasis ဆိုပြီး ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ vaginosis ကတော့ မိန်းမကိုယ်တွင်းမှာ ဘက်တီးရီးယား ဟန်ချက်မညီခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဆက်ဆံဖော်အသစ်တွေ့တဲ့အခါ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မှိုပိုးဝင်ခြင်းတိုင်းမှာ အနံ့မရတတ်ပါဘူး။ တခြားလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်း၊ ယားယံခြင်းတို့ကြုံမှ သတိထားမိတတ်ပါတယ်။ တခါတရံ ပေင်မုန့်နံလို ရတတ်ပေမယ့် မှိုနံ့ရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အနံ့ရခြင်းတခုကပဲ မှိုပိုးဝင်ခြင်းကိုပြတဲ့ လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် vaginosis ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်ကို ယားယံစေတဲ့ တခြားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း စတာတွေနဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ကနေ ပုပ်တဲ့အနံ့ကို ရုတ်တရက် ဆိုးဆိုးရွားရွား ရလာရင် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဓမ္မတာကိစ္စအတွက် tampon သုံးပြီး မေ့ကျန်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ဟာ ကြာရှည်စွာ မေ့ထားခဲ့တဲ့ tampon ကို ထုတ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် ချိန်းဆိုပြသဖို့ မရှက်ပါနဲ့။
မိန်းမကိုယ်အနံ့ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းများ
အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေရှိပြီး အမြဲဂရုစိုက်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ မိန်းမကိုယ်အနံ့ဟာ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စကလွဲလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နေ့စဉ် ဆေးကြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အနံ့မပါတဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့ ဆပ်ပြာကို သုံးပါ။ အိမ်သာဝင်ရင် ရှေ့ကနေနောက်ကို ဆေးကြောပါ။ ရေမချိုးဖြစ်ရင်တောင် အတွင်းခံကို နေ့စဉ်လဲပါ။
မိန်းမကိုယ်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားတာများရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရည်ဆင်းခြင်းဟာ ဒီပြဿနာရဲ့ အဓိကလက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့လည်း ရတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို မကုခင်မှာ တခြားရောဂါ အမျိုးအစားတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာစေရပါမယ်။ ကုသမှုမှာ မိန်းမကိုယ်လိမ်းတဲ့ ဂျယ်လ်အဆီများ၊ ပဋိဇီ၀ သောက်ဆေးများ ပါဝင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ပါးပိုးကြောင့်ဖြစ်တတ်ပြီး အမျိုးသားများရော အမျိုးသမီးများမှာပါ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်တိုင်းမှာ လက္ခဏာ မပြတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကိုယ်က အရည်ဆင်းတာ၊ ဆီးသွားရင် အစိမ်းရောင်သမ်းပြီး အမြှုပ်တွေ ဖြစ်နေတာ၊ ဆီးသွားရင်ပူတာ၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ် နာကျင်တာ၊ လိင်အင်္ဂါ ယားယံတာ စတာတွေ ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်။ ရောဂါရှာဖွေခြင်းကတော့ စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ ကပ်ပါးပိုး ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပြီး ကုသပြီးချိန်မှာလည်း ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Candida လို့ခေါ်တဲ့ မှိုကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်ပူခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အရည်ဆင်းခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ် နာကျင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားကြား ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ မှိုစွဲပျောက်စေတဲ့ဆေးတွေလိမ်းခြင်း၊ သောက်ခြင်းနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးစက်သော ရောဂါများ
Chlamydia နဲ့ Gonorrhea ၂မျိုးစလုံးဟာ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပြီး မိန်းမကိုယ်မှာ အနံ့ဆိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမြှ အလွယ်တကူ ကုသနိုင်ပေမယ့် သေချာမကုသရင် ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရောဂါလက္ခဏာပြတာရှိသလို မပြဘဲလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း၊ ပြည်လို အရည်ဆင်းခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေ မဖြစ်အောင် လိင်မှုကိစ္စ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆက်ဆံနေစဉ် အကာအကွယ်သုံးခြင်း စတာတွေ လိုက်နာရပါမယ်။
တင်ဆုံရိုးကွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ရမ်းခြင်း
ဒီရောဂါဟာလည်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးစက်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများရဲ့ သားအိမ်၊ မျိုးဥအိမ်၊ မျိုးဥပြွန် စတာတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့ ဖျားခြင်း၊ အရည်ဆင်းခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ဆီးစပ်အောင့်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ် နာကျင်ခြင်း၊ ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပြီး မကုသဘဲထားလိုက်ရင် ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေးပြသနာ ဥပမာ-မြုံခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ဒီကင်ဆာဟာ သားအိမ်အောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာတဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ လက္ခဏာတွေကတော့ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် သွေးထွက်ခြင်း၊ အနံ့ဆိုးသော အရည်များဆင်းခြင်း၊ ဆီးစပ်နာကျင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံဖော် အများကြီးရှိရင်၊ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ လိက်ဆက်ဆံရင်၊ ဆေးလိပ်သောက်ရင်၊ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းရင်၊ တခြား လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါရှိရင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွာနိုင်ခြေ များပါတယ်။ ကင်ဆာအဆင့်ပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်း စတာတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်မှာ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ရှားပါတယ်။ စောစီးစွာသိရင် အလွယ်တကူ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ခါစမှာ လက္ခဏာ မပြတတ်ပါဘူး။ ပိုဆိုးလာတဲ့အခါ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းခြင်း၊ ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း၊ ဆီးစပ်ကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ပြသသင့်ပါတယ်။ ကင်ဆာ စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကို မူတည်ပြီးတော့ မိန်းမကိုယ်ကင်ဆာကို လေးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို ကာကွယ်တဲ့ဆေးတွေ သုံးတာများရင်၊ လိင်ဆက်ဆံဖော်များရင်၊ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ကင်ဆာလို့ ရောဂါအမည်တပ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဟာ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်း စတာတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ မိန်းမကိုယ်နဲ့ အူမကြီးကို ဆက်တဲ့အပေါက် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ၊ လေလည်တဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်ထဲကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ ကသိကအောက်နိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေးပျက်ယွင်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပျက်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပြသဖို့ ခက်ပေမယ့် ခွဲစိတ်ဖို့ လိုအပ်တတ်တာမို့ ပြရပါမယ်။
ဒီပြဿနာရဲ့ တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ အနံ့ဆိုးတဲ့အရည်များ မိန်းမကိုယ်မှဆင်းခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်နေရာမှနာခြင်း၊ မကြာခဏပြန်ဖြစ်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်မှ ဝမ်းသွားခြင်း၊ လေလည်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Crohn ရောဂါ၊ ဆီးစပ်နေရာတွင် ကင်ဆာကုသခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း စတာတွေဟာ ဒီအနာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
Why Does My Vagina Smell? http://www.newhealthguide.org/Why-Does-My-Vagina-Smell.html. Accessed January 29, 2017.
Does My Vagina Smell Healthy?5Common Vaginal Odors, Explained. https://www.bustle.com/articles/64679-does-my-vagina-smell-healthy-5-common-vaginal-odors-explained. Accessed January 29, 2017.
6 Vaginal Odors to Put on Your Radar. http://www.cosmopolitan.com/health-fitness/advice/g2720/vaginal-odor/?thumbnails. Accessed January 29, 2017.
This Is What Your Vagina Is Supposed To Smell Like. http://www.self.com/story/this-is-what-your-vagina-is-supposed-to-smell-like. Accessed January 29, 2017.